Global Voices teny Malagasy » Zaza 10 Taona ao Florida Nitory ny Governemanta Amerikana noho ny Haratsin’ny Politika Ara-toetr’andro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Febroary 2018 17:51 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika (fr) i Aurora Luongo, Zo Razafy
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Mediam-bahoaka, Tanora, Tontolo_iainana
Levi Draheim, 10 taona no zandriny indrindra tamin'ireo tanora miisa 21 nametraka fitoriana izay milaza fa manitsakitsaka zony araka ny lalàm-panorenany ny governemanta federaly amin'ny fanohanana ny fampiasana tsy mitsahatra ny akoran'afo milevina izay mandray anjara amin'ny fiakaran'ny hafanana.
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 23 Janoary 2018 ity lahatsoratra nosoratan'i Deepa Fernandes  ity. Naverina navoaka teto izy ity noho ny firaha-miasan'ny PRI sy ny Global Voices.Raha tsy misy fanamarihana manokana, manondro pejy amin'ny teny anglisy ny rohy amin'ity lahatsoratra ity.
Folo taona, i Levi Draheim, marani-tsaina amin'ny matematika, na dia hoe tsy dia tena tiany manokana ary io taranja io. Milalao ny «Humoresque» an'i Dvořák amin'ny lokanga amim-pitokisana ary antsoina hoe JJ ilay foza, biby mpiaraka aminy. Tahaka ny ankizy rehetra, tsy tia mampirina ny tranony i Levi.
Kanefa tsy tahaka ny ankizy folo taona rehetra i Levi: Nitory ny Governemanta Federalin'i Etazonia izy noho ny fanitsakitsahana ny zony araka ny lalàm-panorenana tamin'ny fanohanana ny fampiasana akoran'afo milevina izay mandray anjara amin'ny fiakaran'ny hafanana.
Mipetraka ao amin'ny nosy barrière [fr]  any amin'ny morontsiraka afovoany atsinanan'i Florida i Levi. Ny fiatrehana ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina miampy ny fahasimban'ny tora-pasika dia midika fa afaka telopolo na efapolo taona dia hilentika anaty rano ny tranony, ary difotra ny nosiny amin'ny faran'ity taonjato ity. Zava-misy tsy dia mampiraika na dia ny olon-dehibe monina ao amin'ireo tanàna tandindonin-doza ao Florida izany ary, izay no mahatonga ny fahavitrihan'io zaza tsy fahita io amin'ny fitolomana.
Vavolombelona mivantana ny fiovan'ny toetr'ndro i Levi. Raha nandrava an'i Florida ilay rivo-doza Irma tamin'ny septambra 2017, voa mafy tokoa ny tanànany ao Satelite Beach. Herinandro taorian'ilay rivo-doza, nisy oram-be nikija nandifotra làlana maro. Voatery nafindra i Levi sy ny fianakaviany ary difotry ny rano ny làlana mankao aminy.
“Lalina dia lalina tokoa ka… tonga hatreo amin'ny atsasaky ny fiara” hoy izy.
Difotry ny rano ihany koany sekolin'i Levi ka voatery nikatona
Talohan'ny tondra-drano, nandeha tany an-tsekoly in-telo isan.-kerinandro i Levi, ary mianatra ao an-trano kosa izy ny roa andro ambiny. Tia mandeha any an-tsekoly izy satria any izy afaka miaraka amin'ny ankizy hafa. Tsy afaka mahita azy ireo matetika intsony anefa izy: tratran'ny fahavoazana tsy azo amboarina ny sekoliny. Voatery i Leigh-Ann Draheim reniny mampianatra azy ao an-trano manontolo.
Fa tsy noraharahiany loatra izany.
“Difotry ny rano avokoa ny làlana ao aminay, manana gonim-pasika sy ny toy izany izahay” hoy izy nanazava ” Matahotra izahay fa raha avy be ny orana, dia hanana olana toy izany hatrany hatrany izahay”
Miaina eo amin'ny atao hoe nosy sakana ny fianakaviany, fitagoronam-pasika lava manaraka ny kaontinanta. Tsy dia tsara ho an'ny ampahany amin'ny morontsirak'i Florida ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina.
“Hanjavona ny hiafaran'ilay nosy sakana satria mitovy haavo amin'ny ranomasina izy”, hoy i Leigh-Ann. Niditra an-tsehatra i Levi hanazava bebe kokoa.
“Eny ary, misy ireo sarintany sy ireo zavatra tahaka izany ary maneho izany fa ny lalana manontolo dia ho tafalentika tanteraka. Aotra metatra ambonin'ny ranomasina ny haavo misy anay. Noho izany, na dia mitsonika moramora aza ny ranomandry any an-tendrontany, mizotra mankany amin'ny ranomasimbe izany ary mirotsaka mankany amin'ny farihy amorondranomasin'i Indian River, izay handifotra ny tranonay”, hoy ny fanazavany.
Fiarovana voajanahary amin'ny fiakaran'ny ranomasina ny vongam-pasika mivaingana, na dia mihakaoka aza izany ao Satellite Beach.
Te-hanoro ahy ny fahalevonan'nireo vongam-pasika, mirafitra ho rindrina amin'ny morona mifanandrify amin'i Atlantika ao amin'ny nosy i Levi.
Nentin'izy sy ny reniny teo amin'ny ampahany amin'ny tora-pasika izay misy vongam-pasika mihakaonka aho.
“Ity mari-pamantarana eto ity dia milaza hoe : vongam-pasika tsy azo idirana” hoy i Levi
Tsy miresaka fiovan'ny toetr'andro fotsiny anefa i Levi fa miezaka miady amin'izany koa izy. Ohatra amin'izany ohatra ny fandraisana anjarany sy ny reniny tamin'ny famerenana indray ny vongam-pasika tamin'ny nambolena karazana bozaka antsoina hoe uniole maritime (Uniola paniculata).
“[Ny uniole maritime] no mitana ny vongam-pasika hitambatra, iadiana amin'ny fikaohin'ny riaka ohatra, ny uniole maritime no mitàna azy” hoy ny fanohizan'i Levi.
Kanefa tsy midika izany hoe miasa tsy mijanona ka tsy mba miala voly. Afaka mandeha eny amin'ny tora-pasika amin'ny bisikileta i Levi, manao ny bodyboard ihany koa izy rehefa te hanao izany. Tiany ny fiainany eto.
Na izany aza dia tsy azo lavina fa mahatsapa ny fiantraikan'ny fiakaran'ny ranomasina sy ny toetr'andro tafahoatra izy. Amin'ny lafiny maro dia voajanahary ho azy ny hiaraka amin'ireo ankizy roapolo ao amin'ny firenena mitory ny governemanta federaly any amin'ny fitsarana noho ny tsy fiezahany manao izay hanajanonana ny fiovan'ny toetr'andro. Izy no zandriny indrindra ao amin'ny vondrona.
“Raha ny tena izy dia heveriko fa toy ny voinam-pirenena ny fikorontanan'ny toetrandro ary hahatratra ny rehetra” hoy ny fanamafisan'i Levi. “Ohatra, any Florida, dia afa-mahita vokatra miharihary isika, toy ny rivo-doza roa ao anatin'ny herintaona ary voatery nifindra toerana noho izany, ny fikaohin'ny tora-pasika, sy ny zavatra toy izany”
Amin'ity tranga ity dia tsy manana ny fahamarinana tanteraka i Levi. Mihevitra ny mpahay siansa dia fa tsy miteraka rivo-doza bebe kokoa ny fiovan'ny toetrandro .Saingy misy porofo fa amin'ny ankapobeny fa mihaloza kokoa ny rivo-doza sy ny oram-batravatra hafa.
Tanora mahafatifaty ihany i Levi raha ho an'ny fihetsiketsehana. Miezaka mianatra bebe kokoa hatrany izy, hoy izy mba ahafahana manao mihoatra noho ny teo aloha. Mihaino ny vaovao izy, manery ny reniny hampianatra azy ny tsirinkevitra ara-toetr'andro ao an-trano, ary mihaino antsakany sy andavany ny mpiray tanindrazana zokiny izay nivondrona ho mpitory rehefa miteny.
Nanatevin-daharana ny hetsika ao amin'ny fitsarana nataon'ireo tanora ao anatin'ny fikambanana tsy mitady tombombarotra Our Children’s Trust  i Levi, rehefa niteny tamin'ny reniny ny Pasiteran'ny fiangonany. Nanontany an'i Levi i Leigh-Ann raha te handray anjara izy ary tsy nisalasala ilay zaza sivy taona.
Mpikambana ao amin'ny fiangonana Onitariana Manerantany ao antoerana i Levi sy ny reniny. Fiangonana somary tony sy malalaka izany. Mandritra ny sorona masina, tsy mikiraro i Leigh-Ann ary mitanisa baolina mandritra ny fotoana i Levi. Miresaka ny hafanam-pon'i Levi ireo mpino mandritra ny fisotroan-dite maraina aorian'ny fanompoam-pivavahana.
Isan'ny ankizy vitsy ao amin'ny fiangonana izy saingy hankamamiana.
Tokony hanomboka ny 5 febroary 2018 ny fitsarana. Na maharesy izy na resy hoy i Levy dia manantena fa hijery izany ny filoham-pirenena Amerikana Donald Trump.
“Toa mafy ihany ny mieritreritra fa mandà ny fiovan'ny toetrandro ho olana ilay olona mahery indrindra manerantany ary tsy ho olana mihitsy izany mandrakizay” hoy i Levi “noho izany, sarotsarotra ihany izany”.
Na inona hitranga, nilaza i levi fa hanohy ny ady izy. tsy tiany hanjavona ny nosy maminy.
Avy eo izy nihazakazaka, ary misy kodiarana mifatotra eo amin'ny tongony, ary nijanona teo ambanin'ny voaroihazo izy ary nofenoiny ny voa sy ranony mamy ny vavany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/28/114973/
 nosy barrière [fr]: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_barri%C3%A8re
 Our Children’s Trust: https://www.ourchildrenstrust.org/